ဗဟုသုတ - Blogs - Myanmar in Singapore
All Blog Posts Tagged 'ဗဟုသုတ' (465)
“ချွန်းနဲ.တူအောင်တော့ မကြိုးစားကြပါနဲ.“ ဆိုတဲ့အကြောင်းကို မစတင်မီ “ချွန်း “ ရဲ့သဘော
အမှန်ဆိုပါက ဆင်ကိုထိန်းပေးတဲ့ အဲ့ဒီ “ချွန်း“ လေးမှာ ဘာအရည်အချင်းမျှမရှိဘူး ဆိုတာကို
တော့သိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ “ဆင်ထိန်း“ဆိုတဲ့ “ပဲ့ကိုင်“ တဲ့သူကြောင့်သာ အဲဒီ“ချွန်းလေး“လှုပ်
ရှား နေရတာမဟုတ်ပါလား ။
ဒါ့ကြောင့် “ချွန်း“ ဆိုတဲ့- ဘာအရည်အချင်းမျှမရှိတဲ့ ပစ္စည်းလေးနဲ.…
Added by May Kyaw Shin on June 10, 2013 at 6:00pm —
No Comments နှုတ်ခမ်းအလှအတွက် နှုတ်ခမ်းနီဆိုးဆေးများနှင့်ပတ်သတ်ပြီး သိထားသင့်ပါတယ်။ (***** An alert for lipsticks containing lead *****)
နှုတ်ခမ်းအလှအပအတွက် နှုတ်ခမ်းနီဆိုးဆေးများနှင့်ပတ်သတ်ပြီး သိထားသင့်တယ်ထင်လို့ ပြန်လည်ဝေမျှဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ခဲဓါတ်ပါဝင်မှု့ မြင့်မားတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးဆေးတွေက နှုတ်ခမ်းအလှအပအတွက် ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်… ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့… ခဲဓါတ်ပါမပါကိုစမ်းသပ်နိုင်တဲ့နည်းတစ်မျိုးကတော့ နှုတ်ခမ်းနီကို လက်မှာပွတ်ပြီး ရွှေထည်ပစ္စည်းတစ်ခုခု (ဥပမာ ရွှေလက်စွပ်) နဲ့ ပွတ်ကြည့်လိုက်လို့ နှုတ်ခမ်းနီအရောင်သည် အမဲရောင်ကိုပြောင်းသွားပါက… Continue
Added by Myanmar Roommate on April 15, 2013 at 3:22pm —
No Comments Mind
၂။အလွန်အိပ်မောကျနေပေမဲ့အေးလာတဲ့အခါ၊ခြင်ကိုက်တဲ့အခါ မသိစိတ်ကစောင်ယူခြင်း၊ကုတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။
၃။ဦးနှောက်ကအသိဥာဏ်နဲ. စိတ်ရဲ.အပ်ါယံမှာရှိတဲ့သိစိတ်နဲ.သာ ဆက်သွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ဘာဝနာနဲ. သိမ့်မွေ.တဲ့ ဝေဒနာခံစားနိုင်မှ မသိစိတ်ကိုရောက်နိုင်ပြီး အနုသယကိလေသာတွေကို… Continue
Added by U THAN WIN on January 19, 2013 at 10:40pm —
No Comments လက်သည်းဆိုးဆေး အရောင်ဆန်းဆန်းလေး နှင့် စိတ်ကြိုက် လက်သည်းအလှပုံဖော်ကြရအောင်
essie ကထုတ်လိုက်တဲ့ bikini so tenny လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ လက်သည်းဆိုးဆေးရောင်လေးက အမြင်ဆန်းတဲ့ "a sparkling, cornflower blue" အရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလက်သည်းဆိုးဆေးလေး သုံးပြီးအလှဖော်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတချို့ ကို MySing member မိန်းခလေးများအတွက် မျှဝေကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။…
Added by Myanmar Roommate on December 4, 2012 at 10:28am —
No Comments လှိုင်မဟာစည်ဆရာတော်၏ စင်္ကာပူနိုင်ငံ Mount Elizabeth Hospital တွင် နှလုံးခွဲစိပ်ကုသမှုအတွက် ကုသိုလ်ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်
လှိုင်မဟာစည်ဆရာတော်၏ စင်္ကာပူနိုင်ငံ Mount Elizabeth Hospital နှလုံးခွဲစိပ်ကုသမှုအတွက် ကုသိုလ်ပါဝင်လှူဒါန်းလိုသူများ အောက်ပါ fwd အီးမေးလ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဖုံးနံပါတ်နှင့် Bank Account သို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်း နိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။
Bank account info နှင့် ဖုံးနံပါတ်တို့ကို ဒီပို့စ်မှာဖော်ပြနိုင်ရန် A Mon Aung ၏ သူငယ်ချင်းမှတဆင့်ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး အများကုသိုလ်ယူပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ရန် ဖော်ပြရေးသားပါသည်။
Added by Myanmar Roommate on November 28, 2012 at 3:47pm —
No Comments အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအကြား စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စိတ်အခြေအနေများ
အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ကိုယ်ခန္ဓာ တည်ဆောက်ပုံချင်း ကွဲလွဲမှုရှိရုံသာမက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေကလည်း မတူဘဲ ကွဲပြားမှု ရှိနေတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ တွေ့ရှိထားပါတယ်။
(၁) အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေထက် နှစ်ဆ-သုံးဆ ပိုပြီး စိတ်အပြောင်းအလဲ မြန်တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီး အများစုက အမျိုးသားအများစုထက် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ဖို့ ပိုကြာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသားတွေက သူတို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသား အရာတစ်ခုကို ပိုပြီး ပြီးဆုံးအောင် ဆောင်ရွက်လေ့ ရှိပါတယ်။
Added by Phone Card Villa on November 28, 2012 at 11:42am —
ဆောင်းရာသီတွင် ကျက်သရေရှိစွာ လှပပြီး တက်ကြွ ရွှင်လန်းနေစေရန်
၁) နေရောင်ခြည်ဒဏ်မှ ကာကွယ်ပါ
ဆောင်းရာသီမို့လို့ နေရောင်ကာခရင်မ်… Continue
Added by Phone Card Villa on November 25, 2012 at 5:50pm —
Save the Children, Maltesa, Solidarités International, World Vision, French Red Cross, Thingaha နှင့် US Embassy တို့မှအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ - Save the Children, Maltesa, Solidarités International, World Vision, French Red Cross, Thingaha နှင့် US Embassy တို့မှ အလုပ်ခေါ်စာအသစ်များအား… Continue
Added by Myanmar Roommate on November 23, 2012 at 11:15am —
No Comments အမျိုးသမီးများအတွက် လှပဆန်းသစ်တဲ့ ဆံထုံးပုံစံလှလှလေးများ
မင်္ဂလာဆောင် အခမ်းအနားတွေကို သွားရမယ့် ဒါမှမဟုတ် သတို့သမီးလောင်း MySign Members အမျိုးသမီးများအတွက် လှပဆန်းသစ်တဲ့ ဆံထုံး ပုံစံလေးတွေကို မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။... ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် LIKE or Comment ပေးခဲ့နော်။
Added by Myanmar Roommate on November 22, 2012 at 11:44pm —
မိန်းခလေးများအတွက် လက်သည်းဆိုးဆေးနဲ့ ဖန်တီး အလှပုံဖော်နည်း အဆင့်ဆင့် - Gradient Nails Picture Tutorial
လက်သည်းဆေးဆိုးခြင်းကို နှစ်သက်ခုံမင်တဲ့ မိန်းခလေးများအတွက် လှပပြီးစွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ လက်သည်းလေးတွေဖြစ်ဖို့ လက်သည်းဆိုးဆေးနဲ့ ဖန်တီး အလှပုံဖော်နည်း အဆင့်ဆင့် အသေးစိတ်ကို အောက်က လင့်ခ်မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။…
Added by Myanmar Roommate on November 12, 2012 at 9:30pm —
No Comments ဆော်ဒါပါဝင်တဲ့ ဖျော်ရည်သောက်ချင်စိတ် နဲ့ သင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်
ဆော်ဒါပါဝင်တဲ့ ဖျော်ရည်သောက်ချင်စိတ် ပြင်းပြနေရင် နွားနို့နဲ့ ပျားရည် သောက်လိုက်ပါ
ဆော်ဒါပါဝင်တဲ့ အမြှုပ်ထတဲ့ ဖျော်ရည်တွေကို သောက်ချင်တာဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ကယ်လ်စီယမ်တွေ လိုအပ်လို့ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ် ချို့တဲ့နေရင်… Continue
Added by Phone Card Villa on November 8, 2012 at 2:06pm —
No Comments Obama wins: US presidential election results! Congratulation US President!!
WASHINGTON - US President Barack Obama was re-elected late Tuesday, making history when he wonasecond term in the White House and defeated his Republican challenger Mitt Romney, networks projected. Here isatally of partial results from Tuesday's US presidential election, based on projections by television networks. Key battleground state… Continue
Added by Myanmar Roommate on November 7, 2012 at 2:30pm —
ဒီဓါတ်ပုံ Caption/description က "Every conversation counts" တဲ့။ ကလေးငယ်လေးက ပြောတဲ့ စကားတွေကိုလည်း First Lady "Michelle Obama" က ဂရုတစိုက်လေး နားထောင်ပြုမူပေးနေပုံက လေးစားစံနမူနာယူဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဓါတ်ပုံထဲက အစိမ်းရောင်အင်္ကျီနဲ့ ကလေး လေးနဲ့ Michelle Obama တို့ရဲ့ အပြုအမူလေးက အသက်ဝင်လှတာမို့ ဒီမှာ ပြန်လည်မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။… Continue
Added by Myanmar Roommate on November 5, 2012 at 5:00pm —
No Comments သင်မသိသေးသော ကျန်းမာရေး လျှို့ဝှက်ချက်များ
ပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေ… Continue
Added by Phone Card Villa on November 5, 2012 at 4:47pm —
ဘ၀ နဲ့ ငှက်ပျောပင် ဥပမာ by Spring Flowers on facebook.
Posted by Spring Flowers on Fabcebook
'' ဘ၀ဟာ ငှက်ပျောပင်လိုပါဘဲ ၊ အထဲမှာ ဘာရှိမလဲဆိုပြီး…
Added by Myanmar Roommate on November 4, 2012 at 10:52am —
မျက်နှာအလှပြုပြင်ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန် ဒေါက်တာ ရစ်ချတ်ဟာ အသက် ၄၀အရွယ်၊ သန်းကြွယ်သူဌေး တဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ နောက်ဆုံးအဆင့် အဆုပ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားနေကြောင်း သိရပြီးနောက် သူ့ရဲ့ဘ၀အကြောင်းကို ၁၉.၀၁.၁၂ နေ့မှာ သွားဆေးတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်ကျောင်းသားများရှေ့မှာ ကိုယ်ကျိုးမငှဲ့ပဲ လူအများအတွက် တွေ့ဆုံပြောပြခဲ့ပါတယ်။
မင်္ဂလာ နံနက်ခင်းပါ။ ကျွန်တော့်အသံက နဲနဲသြနေတော့ သည်းခံပေးပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ ရစ်ချတ်ပါ။ ဆရာဝန်ပါ။ ကျွန်တော့်ဘ၀အကြောင်း နဲနဲဝေမျှချင်ပါတယ်။ ပါမောက္ခက…
Added by Myanmar Roommate on November 4, 2012 at 10:46am —
ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင်အဖြစ် အသုံးပြုတတ်ကြတဲ့ သစ်ကြံပိုးခေါက်မှာ အဆီလောင်ကျွမ်းစေတဲ့ အာနိသင် ရှိပါတယ်။ အစာစားပြီးတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ပိုလျှံနေတဲ့ သကြားဓာတ်တွေကို အဆီအဖြစ် သိုလှောင်မှုကို သစ်ကြံပိုးခေါက်က တားဆီးပါတယ်။ သစ်ကြံပိုးခေါက်က ကိုယ်အလေးချိန် မတက်စေဘဲ အချိုဓာတ်ကို… Continue
Added by Phone Card Villa on November 3, 2012 at 1:11pm —
Added by Phone Card Villa on October 31, 2012 at 5:00pm —
No Comments Myanmar national charged with providing false information to MOM
Posted: 30 October 2012 2156 hrs @ CNA
SINGAPORE: The Ministry of Manpower (MOM) has chargeda28-year-old Myanmar national, Kyaw Swar Win, for furnishing false information to the Controller of Work Passes by submittingaforged academic certificate to obtainawork pass.On Tuesday, Kyaw pleaded guilty to the charge in the Subordinate Courts, and was jailed four weeks. MOM… Continue
Added by Phone Card Villa on October 30, 2012 at 10:56pm —
အမျိုးသမီးများ တနေကုန် စမတ်ကျကျ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေဖို့ Bras ၀တ်ဆင်နည်း အဆင့်ဆင့်
Here'satip from Triumph on wearing your bra right to enjoy comfort all day!
Triumph က ဖော်ပြထားတဲ့ နည်းစနစ်တွေနဲ့ Bra ၀တ်ဆင်ရင် သက်တောင့်သက်သာနဲ့ စမတ်ကျကျဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မှန်ကန်တဲ့ နည်းစနစ်ကို လိုက်နာကျင့်သုံးတော့ ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကောင်းမယ် ယူဆလို့ ဒီနည်းစနစ်တွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
Added by Phone Card Villa on October 29, 2012 at 4:30pm —
နှုတ်ခမ်းအလှအတွက် နှုတ်ခမ်းနီဆိုးဆေးများနှင့်ပတ်သတ်ပြီး သိထားသင့်ပါတယ်။ (***** An alert for lipsticks containing lead *****)
လက်သည်းဆိုးဆေး အရောင်ဆန်းဆန်းလေး နှင့် စိတ်ကြိုက် လက်သည်းအလှပုံဖော်ကြရအောင်
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအကြား စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စိတ်အခြေအနေများ
DANGEROUS TAXIS - BE AWARE purifiers in TAXIS
ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားပြီး လက်ထပ်ခါနီးစုံတွဲ မိဘချင်းပေးတွေ့မှ မောင်နှမဖြစ...
ခေတ်ဟောင်းကဒို့ ဗမာပြည်ဘိုးဘွားများရဲ့ ရှားပါးဓါတ်ပုံများ-၁
အပိန်အပဲ့ ... နောက်ဆက်တွဲ
2013June (29)May (65)April (38)March (106)February (141)January (111)2012December (160)November (74)October (55)September (66)August (38)July (95)June (300)May (475)April (289)March (169)February (195)January (104)2011December (116)November (114)October (95)September (79)August (83)July (71)June (121)May (72)April (120)March (86)February (121)January (117)2010December (92)November (140)October (231)September (227)August (243)July (106)June (122)May (42)April (46)March (115)February (106)January (96)2009December (31)November (59)October (127)September (81)August (41)July (39)June (36)May (24)April (23)March (2)February (3)January (1)2008November (8)October (3)September (2)1999November (87) Welcome toMyanmar in Singapore